Mg. Jwxo-shiil, oo Jiraban! – Rasaasa News
Mg. Jwxo-shiil, oo Jiraban!
Hogaamiyaha kooxda UBO,oo kolkii ugu horaysay mudo sanad ah muuqiisa lagu arkay qolka muuqa iyo madaaalada ee Yutube,isaga oo yidhi “cidna nalama soo xidhiidhin.”
Mg. Jwxo-shiil, waxaa uu mar ahaan jiray gudoomiyaha ururkii nabada qaatay ee ONLF. Inta uusan ururku heshiiska qaadan waxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay Mg Jwxo-shiil, ka dib kolkii uu kula shirkoobay xukuumada Eritrea ku ciil baxa ONLF colaada Ethiopia.
Mg Jwxo-shiil, waa Janan ka hadhay jamhuuriyadii jabtay ee Somaliya, 7 sano ka dib burburkii Somaliya, si aan la filayn u noqday gudoomiyaha ururka ONLF. Waxaana xiliyada qaar uu ahaa halyey ay ku dhaartaan kuwa taageera ururka ONLF.
Mg. Jwxo-shiil, waxaa uu noqday macangaga xukun jecel oo jabhad maxdax u noday, waxaana uu ka dhigay masuulinyiintii ururkii ONLF, waxa uu garbiyo iyo wax uu god ku rido.
Mudo gaaban, ka dib wakhtigays guray gacaltooyadii ONLF loo hayeyna way gaabatay, garaad wanaagsan oo wax kala guro ma jirin, gacal colaadayn mooyee.
Xisaabtan, ka dib Jabhada iyo shacabkuba talo waxay ku gaadheen in ayna haboonayn in dagta qori lagu sito abid, balse ay haboon tahay in nabad iyo isfaham wanaag lagu doono.
Sanad gudihii waxaa la gurtay midhihii nabada, isbadalo aan la beenin karina dhinacwalba oo nolosha la xidhiidh ayey heshay ummada Somaliyeed ee degan Ogaden.
Mg. Jwxo-shiil iyo jeeclkiis waxaa soo foodsaartay bahsad la,aan la xidhiidha taageero la,aan, dhaqaale xumo, ugaadhsi iyo jiho la,aan siyaasadeed iyo jab ciidan.
Waxaa kooxda ka joogsaday dad la,aan darteed shirarkii ay qaban jirtay, siyaasad la,aan darteed safaradii dibadaha iyo war la,aan darteed waraysiyadii ay siin jreen warbaahinta.
Masuuliyiintii kooxda, xidhiidh kama dhaxeeyo waayo wax lagu wada xidhiidhaa ma jiro. Qaar ka mid ah masuuliyiintii kooxda buusfis iyo bushi baa baro ka samaystay, qaarna qaafooyinkii ay qabeen baa la kala qaxay.
Mg. Jwxo-shiil, waxaa uu ku gulaalan yahay guri London ku yaal oo uusan geesna u dhaafi karin, marka laga reebo mawlac yar oo duhurkii uu tago. Sideetan jir  Somali ah madaxna soo ahaan jiray, sokeeya la,aan qabowga Saancade saableyda sugay sanka iyo indhaha siin kuma leh waa waxaan suuroobayn.
Sanad ka hore Mg Jwxo-shiil, oo waraysi siiyey Ideecada BBCsomali, wuxuu ku cel celiyey “nabad dooni mayno, nabad dooni mayno, aad baa u cadhaysnahay.”
Dhawaan, ayey ahayd mudo sanad ah, kolkii ugu horaysay ee muuqaalka Mg. Jwxo-shiil la arko, isaga oo gurigiisa ay gabadhi video ka duubtay galisayna Youtube-ka. Waxay waydiisay heshiis nabadeed baa idinka iyo Ethiopia idiin socda ma runbaa? wuxuu yidhi “cid nala soo xidhiidhay warqad iyo af, dibad iyo gude midna ma jiraan.”
Mg. Jwxo-shiil, wuxuu sheegay in uu kula kulmay Jiddah nin uu adeer u yahay oo xajka tagay, wuxuuna ii sheegay buu yidhi “in ay Ethiopia dhibaato badan dadka shacabka ku hayso, dadkuna iyaga uun “UBO” ay ka dhursugayaan.”
[ruuxa xajiya beenta waa laga xarimay]
Xaajo media, ayaa dhawaan qortay warar sheegaya in kooxda UBO, heshiis la galayso Ethiopia heshiiskana ay ku qaybsan tahay kooxdu.
Warkaas ay shabakadu qurxisay war ka gadisan ayay heshay rasaasa.com, oo ah, in Mg. Jwxo-shiil iyo saaxiibadii ay saddex goor ergo u dirteen Ethiopia si magac heshiis ah, laakiin Ethiopia ay ugu jawaabtay “maxay ka nuugtaa ama ku nuugtaa.”
Dad dawlada dhinaceeda ah kana damqanaya foolxumada haysata xubnaha kooxda aan dhex gali karin dadweynaha, ayaa ka codsaday dawlada in la cafiyo xubnaha kooxda.
Wararku waxay sheegayaan suurto galnimada sanadka iman doona in London ay tagi doonaan masuuliyiin heer degaan ah iyo xeer Somali.
Philosopher Somaliyeed baa yidhi “kolkaan taag hayeyna talo ma hayn, haatan oon talo hayna taag mahayo.”
Mg. Jwxo-shiil iyo inta la socota, waano iyo wax sheeg walaaltinimo waa lagala quustay, warmo ay ganaan wiil iyo wadaad ay dilaan ayey wanaag moodeen. Dadweynaha Somalida Ogadeeniya haatan wuu is waafaqay kana bogsay waxyeeladii ay gaadhsiiyeen.
Mg = ma gudbe
bahsad: cabsi badan oo kugu reebta kalsooni daro.
Mudaharaad ka Dhacay Gabiley